NFT bubble inoputika sezvo musika unodonha 90%
Misika yeNFT inodonha makumi mapfumbamwe muzana, kubva pamamiriyoni gumi nemaviri emadhora mukutengesa kusvika pamamirioni emadhora 19.4.
Crypto-arts-zvine chekuita neNFTs zvatorwa nema verse ane chekuita neNFTs senge dijitari zvivakwa uye zvigadzirwa munguva yesvondo rapfuura.
NFT ichangopinda mumusika mukuru pamwe nevanhu vazhinji vane mukurumbira vakaita se Eminem uye Snoop Dogg vachitora kufarira pamusika. Kudiwa kwaive kusingaenzaniswi kusvikira musika weNFT wakwira pamusoro pa3 Chivabvu. Inenge madhora makumi maviri nemamirioni emadhora eNFT yakatengeswa muzuva rimwe chete. Crypto akaunganidzwa akapa $ 100 mamirioni kune yakazara kutengesa. Mumazuva manomwe akapoterera musika wepamusoro, kwakatenderedza $ 170 miriyoni mukutengesa kweNFT kwakapedzwa.
Zvisinei, iyo NFT craze inoita kunge yakadzikira sezvo chete $ 19.4 miriyoni mukutengesa kwakagadziriswa muvhiki rapera. Izvi zvinomiririra kuputsika kwemusika wemasheya kweanoda kusvika makumi mapfumbamwe muzana. Pamari iyoyo, madhora mazana masere emamiriyoni maviri nezviuru zvakaunganidzwa zvakatengeswa muvhiki rapfuura, inova hafu yezvikamu zvese zvakatengeswa. Izvi neimwe nzira zvinofungidzirwa nehondo ichangoburwa mumusika we crypto sezvo crypto inounganidzwa ine simba rakakura mukubudirira kwemusika wese weNFT.
Zvinoenderana nedatha , mashoma chete eNFT anounganidzwa seCryptoPunks neHashmask vakaratidza kusimba. Iyi misika yakabuda seinonyanya kukosha pamisika minomwe yakatarwa. Vanomiririra zvinopfuura makumi mana muzana yehuwandu hwehuwandu hwekutengesa.
Kuputsika kwevhiki nevhiki uye kwezuva nezuva maitiro eNFT
Crypto-arts zvine chekuita neNFTs zvatorwa nema verse ane hukama neNFTs senge dijitari zvivakwa uye zvigadzirwa mukati mevhikie yekupedzisira. Zvinoenderana nedhata, Metaverse NFTs yakaona $ 3.3 mamirioni mukutengesa ichienzaniswa ne $ 3 mamirioni mukutengesa kwekrispto-art NFTs. Mitambo yeNFT vatengesi vakatengesa madhora zviuru gumi nemazana masere nemazana masere svondo rapfuura
Crypto inounganidzwa ndiyo yaive yepamusoro kutengesa maNFTs kutenderera pamusoro pemusika. Pamazuva makumi matatu apfuura, yakadzikira ne66%.
Chikamu cheNFT chakabatanidzwa nemachipisi emitambo ndicho chakanyanya kufarirwa asi chakaona mapotifoliyo anoshanda akaderedzwa ne55%. Mavhiki mashoma apfuura, portfolios dzeNFT dzakapfuura zviuru gumi nezviviri pane yega yega yemhando dzeNFT chikamu chepamusoro. Zvisinei, iyo nhamba yakaderera zvakanyanya kusvika ku3,900, iri padyo nekuderedzwa kwe70 muzana.
Uchishandisa zuva nezuva data, misika yepuraimari uye yechipiri ye crypto inounganidzwa parizvino ndiyo yakakura ecosystem yekutengesa kweNFT. Izvi zvinoteverwa na lChikamu chezvemitambo icho chakatarwa zvakare pamusoro maererano nemukurumbira.
Zvinoenderana ne data, iyo NFT bubble yakatoputika.